JudgeCoin စျေး - အွန်လိုင်း JUDGE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို JudgeCoin (JUDGE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ JudgeCoin (JUDGE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ JudgeCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
JUDGE – JudgeCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ JudgeCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
JudgeCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
JudgeCoinJUDGE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00912JudgeCoinJUDGE သို့ ယူရိုEUR€0.0077JudgeCoinJUDGE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00696JudgeCoinJUDGE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00831JudgeCoinJUDGE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0811JudgeCoinJUDGE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0574JudgeCoinJUDGE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.201JudgeCoinJUDGE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0339JudgeCoinJUDGE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0121JudgeCoinJUDGE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0127JudgeCoinJUDGE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.204JudgeCoinJUDGE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0707JudgeCoinJUDGE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0496JudgeCoinJUDGE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.683JudgeCoinJUDGE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.54JudgeCoinJUDGE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0125JudgeCoinJUDGE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0139JudgeCoinJUDGE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.283JudgeCoinJUDGE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0634JudgeCoinJUDGE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.975JudgeCoinJUDGE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩10.8JudgeCoinJUDGE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.51JudgeCoinJUDGE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.67JudgeCoinJUDGE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.251
JudgeCoinJUDGE သို့ BitcoinBTC0.0000008 JudgeCoinJUDGE သို့ EthereumETH0.00002 JudgeCoinJUDGE သို့ LitecoinLTC0.000168 JudgeCoinJUDGE သို့ DigitalCashDASH0.000101 JudgeCoinJUDGE သို့ MoneroXMR0.000102 JudgeCoinJUDGE သို့ NxtNXT0.712 JudgeCoinJUDGE သို့ Ethereum ClassicETC0.00134 JudgeCoinJUDGE သို့ DogecoinDOGE2.63 JudgeCoinJUDGE သို့ ZCashZEC0.000111 JudgeCoinJUDGE သို့ BitsharesBTS0.281 JudgeCoinJUDGE သို့ DigiByteDGB0.292 JudgeCoinJUDGE သို့ RippleXRP0.0324 JudgeCoinJUDGE သို့ BitcoinDarkBTCD0.000315 JudgeCoinJUDGE သို့ PeerCoinPPC0.0303 JudgeCoinJUDGE သို့ CraigsCoinCRAIG4.16 JudgeCoinJUDGE သို့ BitstakeXBS0.389 JudgeCoinJUDGE သို့ PayCoinXPY0.159 JudgeCoinJUDGE သို့ ProsperCoinPRC1.14 JudgeCoinJUDGE သို့ YbCoinYBC0.000005 JudgeCoinJUDGE သို့ DarkKushDANK2.93 JudgeCoinJUDGE သို့ GiveCoinGIVE19.76 JudgeCoinJUDGE သို့ KoboCoinKOBO2.08 JudgeCoinJUDGE သို့ DarkTokenDT0.0084 JudgeCoinJUDGE သို့ CETUS CoinCETI26.36
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 13 Aug 2020 11:30:03 +0000.